UKUZEZA IFOMU YOKUGCINA → Ukwakhiwa Kwamadolobha Amancanyana ☆ Metalco ☆ Bellitalia
ISIBHENGEZO SOKWAKHA I-DODIG
ISIBHENGEZO SOKWAKHA I-DODIG - singabamele kuphela emakethe yasePoland yezinkampani zase-Italy:
I-METALCO • I-Bellitalia • DESIGN YOKUGCINA
Simema bonke abathintekayo ukuthi babambisane studio yezokwakha i abaqambi, ngqo kithi noma nge Inhlangano Yezakhiwo Zokwakha Umhlabasiyilungu elisekelayo.
Sikumema futhi endlunkulu yethu entsha etholakala I-Warsaw at ul. I-Fort Służew 1b / 10 emlandweni, oyingqayizivele Fort 8.
Kulapha ukuthi imihlangano nezingqungquthela zabalingani bethu namakhasimende ngokubamba iqhaza kwabaqambi bethu base-Italiya kuzohleleka.
I-Metalco - yinkampani yase-Italy eyasungulwa ngo-1984.
Namuhla ungomunye wabakhiqizi abakhulu kunabo bonke izakhiwo ezincane zasemadolobheni emhlabeni.
Inkampani futhi ingekaleli qembu I-Bellitalia i DESIGN YOKUGCINA.
Impumelelo yezentengiso ye-METALCO ingumphumela wokucwaninga okuqhubekayo kanye nesipiliyoni emkhakheni wezokudalwa, ukubambisana nabaqambi abaphambili nabaqambi bezakhiwo, kanye nokusebenzisa ubuchwepheshe bamuva kanye nezinto zokwakha.
Imikhiqizo ye-METALCO iboniswa ngesitayela nokuklanywa ngakunye, okuthi, kuhlanganiswe nekhwalithi enhle kakhulu, kubehlukanisa ezimakethe emhlabeni wonke. Zonke izinqubo zokukhiqiza nezobuchwepheshe zenziwa ngenhlonipho yemigomo yokuphilisana nokuvikelwa kwemvelo.
Sikumema ukuba ubambisane.
I-Bellitalia inkampani yase-Italy, eyingxenye yeqembu le-METALCO, eyasungulwa ngo-1962.
Khiqiza izinto zokwakhiwa kwamadolobha kusuka kuzo zonke izinhlobo zokhonkolo, i-PDM, i-HPC, i-UHPC, i-granite ne-marble aggregate ISIVIVINYO SE-ULTRATENSE.
Inguquko eluhlaza okwakuvumela ukuthi udale noma yiluphi uhlobo lwamandla aphezulu nokuqina.
Idume ngamaqoqo ayo ahlukile izimbiza zezimbali i amabhentshi, izihlalo ezinobukhulu obungajwayelekile, enesisindo esingaphezu kwamathani ayi-3,5 nomoya omuhle owenziwe ngegranite yemvelo noma yemabula.
Zithengiswa ngempumelelo emhlabeni wonke njengemikhiqizo eyingqayizivele ngenxa yezinqubo ezithuthukisiwe zobuchwepheshe kanye nokuklama.
Idizayini Yedolobha iyinkampani yase-Italy efakiwe Iqembu le-Metalco eduze kweBELLITALIA.
Igcwalisa ukunikezwa okubanzi kwezinkampani zodadewethu ezimbili.
Yinkampani esencane amaqoqo ayo enziwa ngabakhiqizi abasebasha, abanikeza imibono emisha kumaqoqo abo, ngokuba ngumphelelisi omuhle kakhulu wemikhiqizo yabalingani asebekhulile, abanolwazi ngabakwaMetalco.
Imikhiqizo yayo ingabizi kakhulu ngenkathi igcina ukuklama okuhle, ikhwalithi nokuqina.
Indawo yokudlala iMetalco
Inkundla yokudlala yesimanje ivumela ukuzijabulisa okungavinjelwe futhi okuphephile emoyeni ovulekile hhayi kuphela kubantwana beminyaka yonke, kepha nakwabantu abasha. Ukudlala kuma-swings nawo wonke amadivayisi abekwe ebaleni lokudlala, ikakhulukazi uma kwenziwa enkampanini yabangane, kuhle ...
Njengamanje, ifenisha yasemgwaqweni ihlanganisa nezembozo zesihlahla. Lezi zinto ezisebenzayo nezinobuhle zingenziwa ngezinhlobonhlobo zezinto zokwakha. Izihlahla ezikhona endaweni yasemadolobheni ziyisiqinisekiso sempilo yabahlali, sokuphumula kanye nemizwa yobuhle yabantu abahlala endaweni eluhlaza. ...
Izinhlelo zokumisa amagumbi okuhlanza zisebenzisa indlela eyomile yenkungu
Izinhlelo ezingamampunge ezisetshenziswe kwinqubo eyomile yezinkukhu zingasetshenziswa ezindaweni ezahlukahlukene. Njengamanje, lapho sibheka indlela ephumelelayo yokuhlanza amagumbi, izixazululo ezinjalo zivame ukunakwa yilabo abaphethe ezempilo ...
Kusha ngokuhlinzekwayo! Iziteshi zokususa ukungasebenzi - ukuhlanzeka kwezandla ezivela kuMETALCO
Iziteshi zokubulala amagciwane / iziteshi zenhlanzeko yezandla ziyintsha kokunikezwayo kwethu njengengxenye yokwakhiwa okuncane. Yisixazululo esenza kube lula ukubulala amagciwane ngesandla nokulahla imfucuza. Landa amakhathalogi nohlu lwamanani >> Ukugeza izandla nokubulala amagciwane kuyimisebenzi ebalulekile evumela ...
Ukwakhiwa kwezakhiwo ezincane kudalwa izinto ezincane zokwakha ezihlanganiswe endaweni yedolobha noma zibekwe esakhiweni sangasese, zinikeze umlingiswa othize endaweni enikeziwe. Izinsika zokhonkolo, amabhentshi wesimanje, izikebhe, amabhodi, izimbiza zezimbali, imigqomo kadoti, izitebhisi zamabhayisekili, ...
IChamber of Architects yeRiphabhulikhi yasePoland
Kuyiqiniso ukuthi ubungcweti bomklami bungumsebenzi wamahhala ongaletha ukwaneliseka okuningi kanye nezinzuzo zezinto ezibonakalayo, kepha indlela eya emsebenzini wokuqala njengomakhi wezakhiwo ayiyona elula noma emfushane. Ngaphezu kwesigaba esisobala sokutadisha nokutadisha ngokujulile, umakhi ofisayo kufanele futhi ...